အားကစားဒါရိုက်တာရာထူးလာတောင်းတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို ပီအက်စ်ဂျီဒါရိုက်တာ ပေါက်ကွဲနေ | Duwun
အီဘရာဟီမိုဗစ်က ပီအက်စ်ဂျီ အားကစားဒါရိုက်တာရာထူးကို တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
ပီအက်စ်ဂျီရဲ့ အားကစားဒါရိုက်တာ လီယိုနာဒိုက အသင်းက ထွက်သွားပြီးသည့်တိုင် ပီအက်စ်ဂျီအကြောင်းကို မကြာခဏ ပြောဆိုဝေဖန်နေတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို ထိုးနှက်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ အသင်းသမိုင်းရဲ့ အထင်ကရ ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၄၀) အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ အသင်းအတွက် ပွဲပေါင်း (၁၈၀) ကစား၊ သွင်းဂိုး (၁၅၆) ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်လီဂူး ချန်ပီယံဆုကို (၄) နှစ်ဆက်တိုက် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၁) နွေရာသီမှာ လီယိုနာဒိုရဲ့ နေရာကို သူအစားဝင်ပြီး စည်းပျက်ကမ်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့ အသင်းကို ပြုပြင်ပေးမယ်လို့ ပီအက်စ်ဂျီဥက္ကဌဆီ တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အနေအထားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပီအက်စ်ဂျီ အားကစားဒါရိုက်တာ လီယိုနာဒိုက “ကျနော် ဒီအကြောင်းကို ပြောတောင် မပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ စည်းပျက်ကမ်းပျက် ဟုတ်လား? ဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတာလဲ? ကစားသမားတွေက ပီအက်စ်ဂျီက ထွက်သွားပြီးရင် ဒီအသင်းအကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောနေကြပါတယ်”
“အကြောင်းရင်း တခုတော့ ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျ။ အီဘရာဟီမိုဗစ်က ကျနော်တို့အကြောင်းကို မပြီးနိုင်၊ မစီးနိုင် ပြောနေတာလေ။ လူတိုင်းက ကျနော်တို့ ပီအက်စ်ဂျီကို လာချင်တယ်ဗျ။ သူဆိုရင်လည်း အသင်းကို ပြန်လာဖို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့သေးတာ။ ပီအက်စ်ဂျီကို အရာအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ သူ ပြောတဲ့ အင်တာဗျူးကို ကျနော် အခုထိ စောင့်နေဆဲပါ”
“ပီအက်စ်ဂျီဆိုတာက သူမရောက်ခင်တည်းက ရှိခဲ့တဲ့အသင်း၊ သူထွက်သွားပြီးလည်း ရှိနေတဲ့ အသင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ကို လာပြောစမ်းပါ။ ဘယ်နေရာမှာ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုပေါ့” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။